China ERV Kupisa Kwekudzorera Ventilator neKunatsa vagadziri uye vanotengesa | AIR-ERV
ERV Kupisa Kudzoreredza Ventilator neKunatsa
ERV Yekupisa Yekudzorera Ventilator ine Yekuchenesa kwete chete yakavakirwa-mukati inoshanda kwazvo kupisa chinja kupora kupisa uye chengetedza simba, asi zvakare wedzera yekutanga firita, inoshanda kabhoni firita uye HEPA firita kunyatso kusefa guruva, mabhakitiriya uye zvimwe zvinokuvadza zvinhu mumhepo, PM2. 5 kunatsa kunyatsoshanda kuri kusvika 99.5%.
Inoshandiswa kune villa, chikoro, cafe kamuri, kamuri yemusangano, hofisi, hotera, rabhoritari, KTV, kirabhu yekusimbisa muviri, cinema, yepasi, imba yekuputa uye dzimwe nzvimbo dzinoda kufefeterwa uye kucheneswa.
1.Sensible aruminiyamu kupisa exchanger uye enthalpy mapepa kupisa exchanger yesarudzo.
2.Standard switch kana smart controller yesarudzo.
3.Brand DC mota kana AC mota yesarudzo.
4.Three dura mafirita mukati.
Iko kune yekutanga firita + inoshanda kabhoni firita + HEPA firita yekudzivirira mweya wakasviba, HEPA firita inogona kunyatso kudzora PM2.5 uye kuona kuti mhepo yakachena uye yakachena.
1.Energy Kuchengetedza: Muchinjikwa kuyerera simba kudzoreredza unit, rectangular mweya chiteshi, yakavandudza simba rekudzoreredza kugona, yakadzora mweya kuyerera kuramba.
2.High-kunyatsoshanda kusefa: Iyo yekupinda mhepo inoteedzana yakarongedzwa neyekutanga firita uye yakakwira-inoshanda HEPA firita mudziyo, iyo inogona kunyatso kusefa guruva, mabhakitiriya uye zvimwe zvinokuvadza zvinhu mumhepo, PM2.5 yekuchenesa kunyatsoshanda inosvika 99.5%.
3.Application Range: Mhepo inoyerera kubva pa50 kusvika 1,000 m³ / h, inokodzera villa, chikoro, cafe kamuri, kamuri yemusangano, hofisi, hotera, rabhoritari, KTV, kirabhu yekusimbisa muviri, cinema, yepasi, imba yekuputa uye dzimwe nzvimbo dzinoda kufefeterwa uye kuchenesa.
4.Ruzha Ruzha: Yakagadziridzwa dhizaini dhizaini, yakashandiswa inonzwika-inotora zvinhu uye isina mutsindo impeller, yakavimbisa yakanaka static kurira mhedzisiro.
5.Main Basa: ipa mweya uye pedza mweya panguva imwechete + kupisa kupisa kuchengetedza simba + HEPA firita yekuchenesa.
Mienzaniso: inogona kuve yakagadzirirwa.
K dzakateedzana neDC mota, bepa kupisa exchanger uye matatu masara firita.
H dzakateedzana neDC mota, aluminium kupisa exchanger uye matatu matete firita.
K dzakateedzana ne AC mota, bepa kupisa exchanger uye matatu masara firita.
H akateedzana ne AC mota, aluminium kupisa exchanger uye matatu masara firita.
Pasuru uye Dhirivhari:
Kavha Details: atorwa kana plywood nyaya.
Port: Xiamen chiteshi, kana sekudikanwa.
Yekutakura Nzira: negungwa, mhepo, chitima, rori, kuratidza nezvimwe.
Nguva yekuendesa: sezasi pazasi.
Zvandakashanda Kugadzirwa kwemisa
Zvigadzirwa zvakagadzirira: Mazuva 7-15 Kutaurirana
Pashure: Yakapisa Kuchena uye Simba Kudzoreredza mweya
Zvadaro: ERD Muchinjikwa & Counter Kuyerera Heat Exchanger
ERB Counter Inoyerera Yekupisa Yekutsinhana
Ductless Wall Yakakwira Ventilator
Double Way Ventilator - kugovera uye kuneta ...
ERC Enthalpy Kupisa Exchanger Core
Imwe Nzira Ventilator - inopa mweya kana exhau ...